On1.click | စိန့်မာရီ
... ှာဂျီရဲအပ္ပယ်လာနယ်မြေ၏ လာနျူဗဲဘော့ဒေသတွင်းမြူနီစပယ်အုပ်ချုပ်ရေး၏ ရုံ...
စိန့်မာရီ (အင်္ဂလိပ်: Sainte-Marie ) သည် ကနေဒါနိုင်ငံ၊ ခူဘက်ပြည်နယ်ရှိ မြို့ဖြစ်သည်။ ရှာဂျီရဲအပ္ပယ်လာနယ်မြေ၏ လာနျူဗဲဘော့ဒေသတွင်းမြူနီစပယ်အုပ်ချုပ်ရေး၏ ရုံးစိုက်ရာလည်း ဟူ၏။ ၂၀၁၁ ခု သန်းခေါင်စာရင်းအရ လူဦးရေ ၁၂၈၈၉ ယောက် နေထိုင်ပြီး ယင်းတို့၏ ၉၉% မှာ ပြင်သစ်စကားပြောကြောင်း ၂၀၀၆ ခုတွင်ကောက်သော စစ်တမ်းအရ သိထားသည်။  ခူဘက်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက် ၅၉ ကီလိုမီတာ (၃၇ မိုင်) အကွာ ရှာဂျီရဲမြစ်တဘက်ကမ်းတွင်ရှိ၏။ 
စိန့်မာရီဒီလာနျူဗဲဘော့ အမည်ရလာမည့်မြေကို ထောမတ်ဂျက်တက်ရှူရာက ၁၇၃၆ ခုတွင် အပိုင်စားရသည်။ တက်ရှူရာက ရသောမြေကို သူ့ဇနီး မာရီကလဲရာဒီဖလူဟီဒီလာဂေါ်ဂျန်ဒီရာ (Marie-Claire de Fleury de La Gorgendière အနက် အနောက်မှ Fleury de La Gorgendière မှာ ဖခင်၏ ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးကို ဆက်ခံရသည်ဖြစ်၍ မာရီကလဲရာသာ အမည်ရင်းဟု ယူ) ကို အစွဲပြု၍ မှည့်ခေါ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒေသတွင်းဘုရားရှိခိုးကျောင်းရှိလာသည်မှာ ၁၇၃၇ ခုတွင် ဖြစ်ပြီး မြူနီစပယ်ကို ၁၈၄၅ ခုတွင် စဖွဲ့သည်။
စိန့်မာရီအဝန်းအဝိုင်းဝင်မြေကို မကြာခဏဆိုသလိုပင် ပိုင်းခြားရာ စိန့်ဘားနက်၊ စိန့်အဇ္ဈဒေါ၊ စိန့်မက်စီမာဒီစကော့ (ယခု စကော့)၊ စိန့်မာဂရိ၊ စိန့်ဟန္နန်ဒင်း၊ စိန့်ဆီးလဗတ်၊ စိန့်အဲလဇီယာ၊ စိန့်ဆီဗရင်၊ စိန့်အန်းဂက်နှင့် ဗါလိဂျွန်ရွှန်ဟူ၍ ပိုင်းခြားခံရသည်။
၁၉၁၃ ခုတွင် ကျေးလက်နှင့်မြို့ပြကို ထပ်ခွဲပြန်သည်။ ၁၉၅၈ ခုတွင် ကျေးလက်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသောမြေကို မြို့အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး စိန့်မာရီဒီလာနျူဗဲဘော့ကို စိန့်မာရီဟု အမည်ပြောင်းသည်။ ၁၉၇၈ ခုတွင် မြို့တော်မြူနီစပယ်နှင့် ဘုရားကျောင်းမြူနီစပယ်အုပ်ချုပ်ရေးတို့ ပေါင်းလိုက်၏။
↑ "(Code 2426030) Census Profile". 2016 census. Statistics Canada. 2017.
↑ Reference number 56297 of the Commission de toponymie du Québec.